Uthotho lweCryobiobank lubonelela abasebenzisi ngeenkqubo zokukhenkceza ezizenzekelayo, ezikhuselekileyo nezithembekileyo ze-cryogenic liquid nitrogen. Iitanki zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, exhotyiswe ngeecaster kunye neziqhoboshi, kunye nokuvuleka kwentamo ebanzi ukuze kube lula ukuyichola nokubeka isampuli. Isampulu inokugcinwa kulwelo okanye umphunga, kwaye inkqubo yolawulo ibonelela ngokulula kunye nokhuseleko oluphezulu. Ukufezekisa umsebenzi woqoqosho kakhulu, uyilo lwethu luqinisekisa ukusetyenziswa okuphantsi kwe-nitrogen engamanzi kunye nobukhulu bokugcina umthamo we-specimen.Itanki yonke isebenzisa iteknoloji yokufuduka, iteknoloji ye-adiabatic kunye neteknoloji yokugcinwa kwe-vacuum ephezulu ukuqinisekisa ukugcinwa okukhuselekileyo kwe-specimen, iyunifomu efanelekileyo. ubushushu kunye nolona lwelo lusezantsi ukusetyenziswa nitrogen. Xa umfuziselo wokugcinwa komphunga, iqondo lobushushu elipheleleyo lendawo yogcino alidluli kwi-10 °C, kwaye umphezulu werekhi engumkhenkce elona qondo lobushushu lisezantsi linokufikelela kwi-190°C. I-Biobank Series ikubonelela ngamava okugcina angcono: ukufikelela ngokukhawuleza kwesampuli, ukhuseleko oluthembekileyo, ukugcwalisa okuzenzekelayo kwenitrogen kunye nomthamo oguquguqukayo wokugcina.
① Iyahambelana nomphunga kunye neendlela zokugcina ulwelo;
② Umthamo ohlukeneyo ozikhethelayo ukuhlangabezana neemfuno zakho zokugcina;
③ Umthamo omninzi wesampulu kwisithuba esiqingqiweyo ukunciphisa iindleko zokugcina;
④ Ukuhambelana kobushushu obugqwesileyo kunye nokuzinza;
⑤ Uzinzo olugqwesileyo lobushushu emva kokuvula isiciko;
⑥ Ubushushu obuphezulu, ukubekwa esweni kwenqanaba kunye nenkqubo ye-alam, ukubekwa esweni kwenethiwekhi okude;
⑦ Ukuzalisa ngokuzenzekelayo inkqubo yenitrogen yolwelo, ikhuselekile kwaye iyasebenza;
⑧ Inkqubo yokulawula inokugcina ngokusisigxina idatha yokusebenza;
⑨ Iqhosha elinye lokususa, kulula ukukhangela, ukukhetha kunye nokubeka umfuziselo;
⑩ uyilo olusebenziseka lula, ukusebenza kamnandi;
⑪ isiciko esitshixwayo, siqinisekisa ngokupheleleyo ukhuseleko lomfanekiso;
⑫ Ixhotyiswe ngamanyathelo asongwayo kunye nebhentshi yomsebenzi;
⑬ Isiqinisekiso se-CE;
Umthamo omkhulu wokugcina
Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo, iimveliso zethu zidinga indawo encinci kwaye zinokugcina iisampulu ezininzi; gcina indawo kwaye unciphise neendleko;
Ubushushu obugqwesileyo obufanayo
I-vacuum insulated steel stainless structure, i-vacuum coverage ephezulu yokuqinisekisa iimpawu ezigqwesileyo zokugquma;
Ubushushu obuzinzileyo bekhava evulekileyo
Innovative isiciko kunye egqwesileyo intamo encinane ukuvuleka uyilo kunokunciphisa kakhulu ulwelo nitrogen evaporation rate.Nokuba ugcine isiciko sivulekile ixesha elide, ubushushu ngaphakathi itanki usenokuzinza kakhulu; iqondo lobushushu alinakuba ngaphezulu kwe -150 ℃ ngeeyure ezingama-48;
Inkqubo yokujonga ubushushu obuphezulu
Inkqubo yolawulo esekwe kwiMicroprocessor kunye neplatinam ethe nkqo ephindwe kabini ingabonisa ubushushu bexesha lokwenyani, ukuchaneka kwe-±1 ℃. Umsebenzisi unokuseta ixabiso labo lobushushu be-alam, kunye nenketho yokuthulisa i-alarm;
Ukuzalisa ngokuzenzekelayo initrogen engamanzi kunye nenkqubo yokubeka iliso kwinqanaba lolwelo
Ngokusekelwe kwi-sensor yoxinzelelo oluhlukeneyo, inkqubo yokubeka iliso kwinqanaba lingabonisa inqanaba le-liquid yexesha langempela, ukuqinisekisa ukuba inkqubo yokuzalisa i-nitrogen ngokuzenzekelayo ikhuselekile kwaye inokwethenjelwa. I-10-intshi yeLCD yokubonisa isikrini sesikrini: ubushushu obuphezulu, ubushushu obuphantsi, inqanaba lolwelo, kunye nesimo sokusebenza njl.
Ukudlula igesi eshushu
I-bypass yegesi eshushu inokususa i-nitrogen ekubushushu bangaphakathi ngaphambi kokuba i-nitrogen engamanzi izaliswe, ukuqinisekisa ukuba kuphela i-nitrogen engamanzi izaliswe kwitanki kwaye ithintele ukuguquguquka kobushushu kwitanki ye-nitrogen engamanzi ngexesha lokuzaliswa. Ibiya kuqinisekisa ukhuseleko lwesampulu kwaye kwakhona ukunciphisa ezongezelelweyo Ulwelo nitrogen ukusetyenziswa.
Inani loyilo lomntu
Itafile encedisayo yensimbi engenasici, ingasetyenziselwa ukubeka okwethutyana iiracks ukukhawulezisa ukukha isampuli kunye nokubeka; amanyathelo okusonga anciphisa ukuphakama kweqonga lokusebenza; ukuvulwa okusecaleni kwitreyi yangaphakathi ukuze kube lula ukufumana iisampuli eziwisiweyo ngempazamo.
Ngaphambili: Umsebenzisi oLungileyo oLawulayo kwi-1000 yeLitha yeTanki yeNsimbi eNgatyiwayo-Umatshini we-ayisikrimu yenitrogen yolwelo – Haishengjie
Okulandelayo: Wide neck laboratory series ulwelo itanki nitrogen
UMZEKELO YDD-350-VS/PM YDD-450-VS/PM YDD-550-VS/PM YDD-750-VS/PM YDD-850-VS/PM
Umthamo we-LN2 Ngaphantsi kweQonga lokuGcina uMphunga (L) 55 55 80 80 135
LN2 Umthamo (L) 350 460 587 783 890
Ukuvulwa kweNtamo (mm) 326 326 445 445 465
Ubude obusebenzisekayo bangaphakathi (mm) 600 828 600 828 773
Ububanzi bangaphandle (mm) 875 875 1104 1104 1190
Umphakamo buWonke (mm) Uqulathe uMphakamo weSixhobo 1326 1558 1321 1591 1559
Ubunzima obungenanto (kg) 219 277 328 372 441
Ubude boMsebenzi (mm) 1263 1212 1266 1216 980
Ubunzima Ulwelo lugcwele (kg) 502 649 802 1005 1160
iMfuneko yobubanzi bomnyango (>mm) 895 895 1124 1124 1210
Ubungakanani boMmandla wokuGcina oyi-2ml yaNgaphakathi yeRotary Freeze Storage Tube
1.2,1.8 & 2 ml Iingqayi (Ezinemisonto yaNgaphakathi) (ea) 13000 18200 27000 37800 42900
Inani leeRakhi ezinama-25 (5×5) Iibhokisi zeeSeli (ea) 4 4 12 12 4
Inani leeRakhi ezine-100 (10×10) Iibhokisi zeeSeli (ea) 12 12 24 24 32
Inani leebhokisi zeeseli ezingama-25 (5×5) (ea) 40 56 120 168 52
Inani le-100 (10×10) Iibhokisi zeeSeli (ea) 120 168 240 336 416
Inani lamaQonga ngokweRakhi nganye (ea) 10 14 10 14 13
Ubuphezulu beSitya soMmandla
Ukhuseleko oluPhakamileyo lwesakhono sezitro (0.5 ml) (ea) 111312 131220 203040 253800 304920
Ukhuseleko oluPhezulu lweSitro soMmandla (0.25 ml) (ea) 254592 301120 468544 585680 699360
Inani leeCanisters (76 mm) (ea) 52 52 112 112 120
Inani leeCanisters (63 mm) (ea) 8 8 0 0 16
Inani leeCanisters (38 mm) (ea) 28 12 24 24 40
Inani lamaNqanaba kwiCanister nganye (ea) 4 5 4 5 5
Umphakamo weNqanaba (mm) 135 135 135 135 135
Ubuninzi beSingxobo seGazi
Uhlobo lwesingxobo segazi Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu
UMZEKELO YDD-1000-VS/PT YDD-1300-VS/PM YDD-1600-VS/PM YDD-1800-VS/PM YDD-1800-VS/PT
Umthamo we-LN2 Ngaphantsi kweQonga lokuGcina uMphunga (L) 135 265 300 320 320
LN2 Umthamo (L) 1014 1340 1660 1880 1880
Ukuvulwa kweNtamo (mm) 465 635 635 635 635
Ubude obusebenzisekayo bangaphakathi (mm) 900 620 791 900 900
Ububanzi bangaphandle (mm) 1190 1565 1565 1565 1565
Umphakamo buWonke (mm) Uqulathe uMphakamo weSixhobo 1827 1398 1589 1883 1883
Ubunzima obungenanto (kg) 495 851 914 985 985
Ubude boMsebenzi (mm) 950 997 967 1097 1097
Ubunzima Ulwelo lugcwele (kg) 1314 1934 2255 2504 2504
iMfuneko yobubanzi bomnyango (>mm) 1210 1585 1585 1585 1585
1.2,1.8 & 2 ml Iingqayi (Ezinemisonto yaNgaphakathi) (ea) 51000 58500 76050 87750 94875
Inani leeRakhi ezinama-25 (5×5) Iibhokisi zeeSeli (ea) 16 18 18 18 13
Inani leeRakhi ezine-100(10×10) Iibhokisi zeeSeli (ea) 30 54 54 54 60
Inani leebhokisi zeeseli ezingama-25 (5×5) (ea) 240 180 234 270 195
Inani le-100 (10×10) Iibhokisi zeeSeli (ea) 450 540 702 810 900
Inani lamaQonga ngokweRakhi nganye (ea) 15 10 13 15 15
Ukhuseleko oluPhakamileyo lwesakhono sezitro (0.5 ml) (ea) 365904 480168 600210 720252 671166
Ukhuseleko oluPhezulu lweSitro soMmandla (0.25 ml) (ea) 839232 1101000 1376250 1651500 1543884
Inani leeCanisters (76 mm) (ea) 120 234 234 234 232
Inani leeCanisters (63 mm) (ea) 16 42 42 42 24
Inani leeCanisters (38 mm) (ea) 40 54 54 54 39
Inani lamaNqanaba kwiCanister nganye (ea) 6 4 5 6 6
Uhlobo lwesingxobo segazi Iingxowa zizonke Iingxowa / iifreyimu No. Isakhelo Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iibhegi ze-Ibtal Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Iifreyimu Iingxowa zizonke Iingxowa/ Isakhelo No. Isakhelo
Isikhenkcisi seCryogenic samanzi eNitrojeni
Isikhenkcisi seNitrogen engamanzi
Izikhongozeli Zesikhenkcisi Sentsimbi Engatyiwayo